Hipmụ amaala nke Antigua na Barbuda Passport nke Antigua na Barbuda
ỌT ANT AN ANTIGUA NA BARBUDA
Amaala Antigua na Barbuda - Business Investment single
ỌR AN ANTIGUA NA BARBUDA Họrọ ọrụ
Igmụ amaala Antigua na Barbuda
Nkwụnye ego maka usoro amaala Antigua na Barbuda
Abamuru nke ensmụ amaala nke Antigua na Barbuda
Antigua na Barbuda bụ mba agwaetiti nke na-enye ndị ala ọzọ otu mmemme kachasị mma maka inweta ụmụ amaala n'ọnọdụ mgbanwe. Ihe a na-ewu ewu na paspọtụ nke mba a bụ n'ihi na e nyere onye nwe ya ọtụtụ ohere, gụnyere:
Nleta na-enweghị Visa na mba EU, Great Britain, wdg.
inweta visa dị ogologo oge na United States;
inye ohere maka ọrụ nke ụlọ akụ Europe;
ikike iji bulie ụtụ isi.
N'otu oge ahụ, ịnweta nwa amaala nke Antigua na Barbuda apụtaghị ịhapụ paspọtụ dị adị, na iji bụrụ nwa amaala nke obodo agwaetiti, ịkwesighi ịgafe ajụjụ ọnụ na akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ ma gafee ule asụsụ . Otu ihe dị mma: asụsụ gọọmentị nke Antigua na Barbuda bụ Bekee, n'ihi na ndị na-ebufe paspọtụ anaghị enwekarị nsogbu asụsụ.
Ihe choro maka ndi n’enye ego
Afọ karịrị 18
Nkwenye nke ọma
Ntuziaka itinye ego
Iji nweta akwụkwọ ikike ngafe nke Antigua, ọ dị mkpa itinye ego (ego opekata mpe bụ $ 100 puku, ewepu ego gọọmentị na ụgwọ ndị ọzọ) n'ime National Development Fund nke Steeti. Enweghi ike ịkwụghachi ego ahụ, ma ego ezuru ezinụlọ nke di na nwunye abụọ na ndị na-adabere na ya. Ọ bụrụ na ndị ọzọ dabere, ego ahụ na-abawanye na $ 125,000.
Itinye ego na National Trust abụghị naanị nhọrọ maka ịnweta paspọtụ Antigua na Barbuda. Enwekwara ike ịghọ nwa amaala nke steeti a n'ụzọ ndị a:
itinye ego na oru ngo (site na 1.5 nde US dolla) na otu onye ntinye ego;
ịzụta ala (site na 200 puku dollar US);
onyinye na Mahadum West Indies (site na 150 puku dollar US, a naghị akwụghachi onyinye ahụ).
Ndị na-eme atụmatụ inweta ụmụ amaala Antigua site na ịzụrụ ala kwesịrị iburu n'uche na gọọmentị kwadoro ndepụta nke ihe ndị dịnụ. Ọ dị mkpa ịnwe ihe onwunwe enwetara maka oge opekata mpe afọ 5.